ခရစ်ယာန်တိုင်းပြည်နဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် စစ်ဖြစ်လျှင် ဘယ်ဖက်ကနေ နေမှာလဲ? | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
ခရစ်ယာန်တိုင်းပြည်နဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် စစ်ဖြစ်လျှင် ဘယ်ဖက်ကနေ နေမှာလဲ?	December 10, 2009
One Response to “ခရစ်ယာန်တိုင်းပြည်နဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် စစ်ဖြစ်လျှင် ဘယ်ဖက်ကနေ နေမှာလဲ?”
(“နိုင်ငံရေးစစ်ဆိုရင်တော့ တရုတ်ဘက်ကနေ တိုက်ပေါ့၊ ဘာသာရေး စစ်ဆိုရင်တော့ အမေရိကန်ဘက်ကနေ တိုက်ပေါ့ ဒ‘ါပေမယ့် ယေရှုကို ယုံကြည်သူဆိုရင်တော့ ရန်သူကိုပင်ချစ်ဖို့ ယေရှုက ပညတ်ထားလို့ ဘယ်ဘက်ကမှ မတိုက်နဲ့ပေါ့”)
ဒါတွေက ခင်ဗျားသာဆိုရင် တကယ်လုပ်နိုင်ပါ့မလားဗျ။ တကယ်ရော ရန်သူကို ချစ်နိုင်ရဲ့လား။ လုံးဝ မယုံပါ။ စကားပြောတော့ ကောင်းပါတယ်။ တကယ်တော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်သိမှာပါ။ သည်းခံတယ်ဆိုတာ ယေရှုမှာတောင် မတွေ့ရပါဘူး။ ကျမ်းစာမှာ ရှာကြည့်ပါ။ချက်ချင်းတုန့်ပြန်လိုက်တာပါဘဲ။